Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Entertainment » Goobaha wareegga ee Waqooyiga Ireland ayaa ka dhammaada qosolka
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Entertainment • Music • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka UK • Wararka kala duwan
Qof kastaa ma jecla in lagu qoslo laakiin qof qosol badan, riyadaada ugu xun waxay noqon doontaa inaan lagu qoslin.
Cillad-yari aad u daran kadib COVID-19 ayaa ku dhacda warshadaha wareegga ee Waqooyiga Ireland.
Clown -yaasha xiisaha leh waxay u baahan doonaan inay sameeyaan wax ka badan kaliya inay isku qurxiyaan qurxinta iyo baastada lob si ay u buuxiyaan kabaha waaweyn ee xirfaddooda.
Inaad noqoto qof qosol leh waa inaad awood u yeelatid inaad naftaada ku maaweeliso - maahan inaad dadka kale ku maaweeliso.
Circuses -ka ayaa mar dhow mar kale ku soo dalxiisanaya Waqooyiga Ireland Cudurka COVID-19 way dabacsan yihiin, laakiin sida laga soo xigtay warbixinnada wararka Ingiriiska, waxay la kulmayaan ciriiri -yari aad u daran, iyadoo madaxda circus -ka ay aad ugu dadaalayaan sidii ay u heli lahaayeen jilaayaal cusub.
Waqtigan xaadirka ah, adduunka oo dhan waa ogyahay UKDhibaatada shidaalka ee socota, laakiin dad aad u yar ayaa ogaanaya inay sidoo kale jirto yaraanta qowlka Northern Irelandwareegyada.
Qaar badan oo ka mid ah kuwa wax soo bandhiga ayaa midkood ku noqday dalalkooda bilowgii masiibada COVID-19 sanadkii hore, ama tan iyo markii ay dibedda aadeen si ay shaqo uga raadsadaan waddammada dib u furmay.
Iyada oo habka fiisooyinka loogu talagalay kuwa aan ka tirsanayn EU-da mid adag, milkiilayaasha circus waxay isku dayayaan inay la xiriiraan qof kasta oo guriga jooga oo dareensan inay siin karaan.
Clown -yaasha xiisaha leh waxay u baahan doonaan inay sameeyaan wax ka badan kaliya inay isku qurxiyaan qurxinta iyo baastada lob si ay u buuxiyaan kabaha waaweyn ee xirfaddooda. Sida laga soo xigtay mid ka mid ah milkiilaha wareegga, marka aad gasho giraanta wareegga oo aad haysato 700 illaa 800 oo qof oo ku eegaya, si kasta oo ay tahay niyadda aad ku jirto waa inaad iftiimisaa giraanta wareegga. Waa inaad awood u yeelatid inaad akhrisato dhagaystayaashaada, dhowr daqiiqo gudahood waa inaad awood u yeelatid inaad hesho isfaham iyaga la socda oo aad is dhex gasho oo aad quudiso.
In kasta oo kaftanku is qoro, ganacsiga qosolku ma aha arrin qosol leh, xirfadlayaasha warshaduhu waxay yiraahdaan: “Ma aha in qof walba jeclaado in lagu qoslo laakiin qof qosol badan, riyadaada ugu xun waxay noqon doontaa inaan lagu qoslin. “
"Waa inaad awood u yeelatid inaad ku maaweeliso naftaada, maahan inaad ku kaftamto dadka kale."